XOG: Dowladda Somaliya oo Xeradii Imaaraadka ku wareejisay Shirkad Fadhigeeda yahay London – XAMAR POST
XOG: Dowladda Somaliya oo Xeradii Imaaraadka ku wareejisay Shirkad Fadhigeeda yahay London
By Mohamed Ahmed On May 13, 2018
Ilo dhanka ammaanka ah ayaa xaqiijiyay xeradii Imaaraadka ay ku tababari jireen ciidanka Somalida in lagu wareejiyay Shirkad gaar ah oo fadhigeeda uu yahay Magaalada London ee dalka UK.
Wareejinta Xeradan waxa ay ka dambeysay, kadib markii dowladda Imaaraadka Carabta ay joojisay dhamaan taakuladii iyo tababaradii ay siin jirtay ciidanka Xoogga dalka Somaliya, qaybtoodii loogu magacdaray Imaaraadka.
Saraakiisha dhanka ammaanka ayaa sheegay in Shirkada lagu wareejiyay xeradan ciidan magaceeda uu yahay Red Four Security Group for Somalia (SRG), markii horena ay ka shaqeyn jirtay arrimaha Burcad badeeda iyo ilaalinta xeebaha Somaliya.
Qoraal ka soo baxay Taliska Ciidanka Xoogga dalka Somaliya oo uu ku saxiixnaa Abaanduulaha Ciidamada Xoogga dalka Jeneraal C/laahi Cali Caanood, ayaa lagu sheegay in Taliska Ciidanka Xoogga dalka Somaliya uu aqbalay in xeradan lagu wareejiyo Shirkadan, kadib markii ay soo codsatay.
Qoraalka ka soo baxay Taliska Ciidanka Xoogga dalka Somaliya oo la ogeysiiyay Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo Wasiirka Gaashaandhigga ayaa lagu sheegay ahmiyadda inay tahay tayeynta iyo tababarida ciidamada Xoogga dalka Somaliya.
SNA oo laga soo gaabiyo magaca ciidamada Xoogga dalka Somaliya ee Somali National Army ayaa la sheegay inay masuul ka yihiin ilaalinta amniga Saraakiisha iyo hawlwadeenada Shirkadan lagu wareejiyay xerada Jeneraal Gordan ee Imaaraadka ay ku tababari jireen ciidamada Xoogga dalka Somaliya.
Inta badan ciidamadii ay tababareen Imaaraadka Carabta ee ku sugnaa Xerada Jeneral Gordan ayaa iska kala tagay, kadib markii ay ka niyad jabeen helitaanka xuquuq joogta ah oo ay ka helaan dowladda Federalka Somaliya, inkastoo hadda Shirkad gaar ah lagu wareejiyay.
Tani waxa ay muujinaysa in ciidamada Xoogga dalka Somaliya dushooda lagu raadsado anfacaad gaar ah oo aan la ilaalin xogaha Qaran ee ciidanka, maadaama Shirkado gaar loo leeyahay oo ay maamulaan Saraakiil calooshood u shaqeystayaal ah in lagu wareejiyay ciidamada.
Maamulka Jubaland oo Odayaasha ka mamnuucay in ay shiraan
R.W Khayre oo xalay kormeer ku tagay qeybo ka mid ah Muqdisho (SAWIRRO)